Amazwe we-AppleCare + e-Australia naseNew Zealand | Ngivela kwa-mac
Uhlelo lokuvikela olwengeziwe i-Apple esinikeza lona nge-AppleCare emazweni amaningi, kufaka phakathi indlela ye-AppleCare +, esivumela ukuthi senze inkontileka eyengeziwe ukumboza noma isiphi isigameko idivayisi yethu engaba naso, kungaba ngokusetshenziswa okujwayelekile noma ngomonakalo odalwe izingozi ezingafuneki.
I-AppleCare iyatholakala emhlabeni wonke kubo bonke abasebenzisi abafuna ukuyiqasha, kepha kuphela inketho ongayibheka kwi-Mac, ngenxa yosizo olwandisiwe olunikezayo. Noma kunjalo, Imodi ye-AppleCare + itholakala kuphela e-United States nase-Japan. I-AppleCare + isinikeza izinguquko zokugcina noma zedivayisi. I-Australia neNew Zealand basanda kufakwa kuleli qembu labasebenzisi abakhawulelwe futhi abakhethiwe.
I-Apple isinikeza isikhathi se- Ezinsukwini ezingama-60 ngemuva kosuku lokuthenga ukuze zikwazi ukwenza inkontileka kokubili i-AppleCare ne-AppleCare +, inqobo nje uma umkhiqizo udlulisa ukuxilongwa okwenziwe yi-Apple, yize into ejwayelekile wukuwuqasha ngesikhathi lapho kuthengwa imishini emisha. Amanani ase-Australia e-AppleCare + kwi-Mac Mini angama-dollar ayi-149 ase-Australia (ama-euro angama-95), kuyilapho eye-MacBook Pro engama-intshi angu-15 enoTouchbar intengo ikhuphuka yaze yafika kuma-dollar angama-449 ase-Australia (cishe ama-euro angama-280).
Uma sihlangabezana nengozi ethinta idivayisi yethu, ethinta isikrini kanye nomonakalo wezimonyo we-15-inch MacBook Pro, kuzofanele sikhokhe ama-dollar ayi-129 ase-Australia, kanye nama-dollar angama-429 nganoma yikuphi okunye ukulungiswa. ENew Zealand, iAppleCare + ibiza ama-149 N $ (ama-euro angama-88) kanti intengo ye-AppleCare + ye-15-inch MacBook Pro eneTouchbar ibalelwa ku-539 N $ (318 euros). Uma udinga usizo oluthinta isikrini noma ukulimala kwezimonyo ze-MacBook Pro, intengo inyukela ku-N $ 169 naku-N $ 499 ye- noma yimuphi omunye umonakalo ongahambisani nesikrini noma umonakalo wobuhle.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izaziso » I-AppleCare + ifika e-Australia naseNew Zealand